You are at Home विदेश Page 2
डोकलामबाट भारतीय सेनालाई हटाउन चीन सैन्य अभियानको तयारीमा
वीरगंज २३ साउन । चीनले सीमा विवाद रहेको क्षेत्र डोकलामबाट भारतीय सेनालाई हटाउनका लागि सैन्य अभियानको तयारी गरिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । भारतीय सेनालाई डोकलामबाट हटाउनका लागि आउँदो दुई हप्ताभित्र सानो सैन्य अभियानको तयारी गरेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पत्रिका ग्लोबल टाइम्सलाई उद्धृत गर्दै भारतीय पत्रिका द इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ । ग्लोबल टाइम्समा छापिएको लेखमा चीनले डोकलाममा रहेको गतिरोध लामो समयसम्म लम्ब्याउन नचाहेको…
विदेशी नागरिकलाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिने कतारकोे तयारी
वीरगंज २० साउन । कतारले विदेशी नागरिकलाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिने तयारी गरेको छ । विदेशी कामदारमाथि भारी मात्रामा निर्भर रहेका कुनै पनि खाडी मुलुकमा यो योजना ल्याइएको पहिलो हो । कतारको मन्त्रिपरिषदले विदेशीलाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिने योजनाको मस्यौदालाई पारित गरेको छ । यद्यपि स्थायी बसोबासका लागि केही सर्त राखिएका छन् । मस्यौदाअनुसार कतारी महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकको बच्चा तथा राम्रो काम गर्ने…
डोकलामबाट भारतीय सेनापछि हटेको चीनको दावी
वीरगंज १९ साउन । चीन र भारत बीच सीमा विवाद रहेको क्षेत्र डोकलामबाट भारती सेना पछि हटेको चीनले दाबी गरेको छ । डोकलाममा भारतीय सैनिकको संख्या कम भएको चीनले दाबी गरेको भारतीय पत्रिका इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको दस्तावेजमा डोकलाम सीमामा पहिले चार सयको हाराहारीमा भारतीय सैनिक रहेकोमा अहिले घटेर ४० पुगेको उल्लेख छ । तर भारतले भने चीनको दाबीको…
अफगानिस्तानको मस्जिदमा विष्फोट, २९ को मृत्यु ६४ घाइते
वीरगंंज, १८ साउन । अफगानिस्तानको पश्चिमी शहर हेरातमा रहेको जावादिया मस्जिदको प्रवेशद्वारमा बम आक्रमण हुँदा २९ जनाको ज्यान गएको छ भने ६४ जना घाइते भएका छन् । कम्तिमा दुईजना आक्रमणकारीले आक्रमण गरेको र त्यसमध्ये एकजना आत्मघाती आक्रमणकारी रहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । हेरात शहरका गर्भनरले आत्मघाती आक्रमणकारी मस्जिद भित्र प्रवेश गरी नमाज पढिरहेकालाई गोली चलाएको र त्यसपछि आफैलाई विस्फोट गराएको बताएका छन् । केही…
सीमा क्षेत्रमा थप सेना खटाउने चीनको चेतावनि
वीरगंज, १० साउन । भारतसंग केही समय अघिदेखि विवाद परिरहेको सीमाक्षेत्रमा थप सेना खटाउने चेतावनी चीनले दिएको छ । चीनले भनेको छ, जस्तोसुकनै अवस्थामा पनि सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि हामी हाम्रा सेना उक्त क्षेत्रमा थप खटाउनेछौँ । चीन, भुटान र भारतको सीमाक्षेत्रमा पर्ने उक्त क्षेत्रमा गएको महिना दिनभन्दा लामो समयदेखि सो विवाद रहिआएको छ । सो विवादका कारण उक्त क्षेत्रमा चीनले निर्माण गर्न लागेको सडक पनि…
कतारको समस्या समाधानका लागि टर्किले पहल गर्ने
वीरगंज, ९ साउन । गत महिनादेखि जारी कतारको समस्या समाधानका लागि टर्किले पहल गर्ने भएको छ । कतारमा जारी नाकाबन्दीबाट उब्जिएका समस्या समाधानका लागि टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तायप एर्डोगानले गल्फ राष्ट्रहरुको भ्रमण गर्नुहुने भएको हो । उहाँले आजै देखि कतार र साउदी अरेबियाको भ्रमण तय गर्नुभएको छ । पछिल्लो समयमा कतार गम्भीर कुटनीतिक संकटमा परेको छ । एर्डोगानको भ्रमणले कतार समस्या समाधानको पहल हुने विश्वास…
मनसरोवर र मुक्तिनाथको अनुदान यात्रीको संख्या हजार
वीरगंज, साउन ५ । भारतको तामिलनाडु सरकारले चीनको मानसरोवर र नेपालको मुक्तिनाथको तीर्थयात्राका लागि सरकारी अनुदान पाउनेहरुको संख्या दोब्बरले बढाएर १ हजार पु¥याएको छ । यो बढोत्तरीले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको अतिरिक्त २ करोड नेरु थपिएको छ । मानसरोवर र मुक्तिनाथ यात्राका लागि तामिलनाडुका तीर्थयात्रीहरुमा ठूलो आकर्षण देखिएपछि त्याहाका मुख्यमन्त्री के. पलानीस्वामीले यो निर्णय गरेका हुन । पूर्व मुख्यमन्त्री स्व. जयललिताले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा…
इरानमा जासुसीको आरोपमा एक अमेरिकी नागरिकलाई दशवर्ष कैद सजाय
वीरगंज साउन २ । इरानमा अमेरिकी एक नागरिकलाई जासुसीको आरोपमा १० वर्षको जेल सजाय सुनाईएको छ । इरानको सरकारी टेलिभिजनले अमेरिकी नागरिकलाई जेल सजाय सुनाएको प्रसारण गरेको थियो । सियु वाङ नामका ३७ वर्षका उनले अमेरिकी र बेलायती संस्थाका लागि जासुसी गर्ने गरेको इरानलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ । इरानका अनुसार झण्डै ७० जना जासुसीको आरोपमा पक्राउ परेका छन् र ती मध्ये केहीको नाम…
बालकको जन्मदिन पार्टीमा गोलि प्रहार, ११ जनाको मृत्यु
वीरगंज, असार ३० । मेक्सिकोमा बच्चाको जन्मदिनको पार्टीमा गोली प्रहार गरी ११ जनाको हत्या गरिएको छ । मेक्सिकोको हिडाल्गो प्रान्तको तिजायुका शहरमा केही नकावधारी व्यक्तिले बच्चाको जन्मदिनको पार्टीमा गोली प्रहार गरी ११ जनाको हत्या गरेका हुन् । प्रहरीले घटनास्थलमा तीन बालकलाई जिवितै फेला पारेपनि ११ वयस्कलाई भने हत्या गरिएको अवस्थामा फेला पारेको हो । यस वर्षको मे मा मात्र २ हजार १ सय ८७ जनाको…
राष्ट्रपतिको कपाल काट्न मासिक १२ लाख !
फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्राँस्वा ओलाँदले कपाल मिलाउनकै लागि हरेक महिना लगभग १२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । फ्रान्सको व्यंग्यात्मक तथा अनुसन्धानमूलक पत्रिका ले कनार्ड अचाँले यसका बारेमा समाचार छापेपछि फ्रान्स सरकारका प्रवक्ता स्टेफानी ले फोलले यसलाई पुष्टि गर्दै आफ्ना हाकिमलाई बचाउन खोजेका थिए, एपीले बताएको छ । “यसका बारेमा गरिने प्रश्न र दिइने धारणा म बुझ्छु,” ले फोलले भने । “सबैजनाले…